Ndeipi mukana mutengo | Economy Finance
Encarni Arcoya | 02/01/2022 23:34 | Yakagadziridzwa ku 02/01/2022 23:37 | General hupfumi
Imwe yemafungiro ekutanga ehupfumi aunofanirwa kudzora ndiyo mutengo wemukana. Iyo metric inobatsira vanhu nemakambani kuti vaongorore kuti mhedzisiro yesarudzo ingave yei, saka nei yakakosha, kwete mune zvehupfumi chete, asiwo mune zvemari, mune macroeconomics ...
Asi, Ndeipi mari yemukana? Ndeapi mabasa ane? Kune mhando dzakawanda? Kana iwe uchida kuziva zvese, ramba uchiverenga uye uchazviwana.
1 Ndeipi mari yemukana
2 Mukana mutengo marudzi
2.1 Kuwedzera mari yemukana
2.2 Constant mukana mutengo
3 Sei mutengo wemukana uchikosha zvakadaro?
4 Chii chinonzi mukana mutengo mune zvemari
5 Zvinoverengerwa sei
Mukana wacho unodhura, zvakare inozivikanwa semubhadharo wemukana kana imwe mutengo imari, ingava yenhema kana kuti yokufungidzira, isingaitwi kuitira kuisa mari muchimwe chinhu chiri chokukurumidzira zvikuru kana kuti chinokosha zvikuru.
Nemamwe mashoko, tiri kutaura pamusoro penhevedzano ye midziyo isingagamuchirwi nekuti takasiya basa tichifarira imwe sarudzo. Muenzaniso unogona kunge uine sarudzo mbiri, uye iwe unogona kungosarudza pane imwe chete. Mutengo wemukana, kana kukosha kwesarudzo yakanakisa isina kuitika, ingave iyo yausingazosarudza. Chimwe chinhu sekusarudza pakati pekutenga Coca-Cola nebhodhoro remvura; Hazvina mhosva kuti chii chaunosarudza, pachagara paine mukana wemutengo mune icho chigadzirwa chausingafungi kutenga.
El Mugadziri wezwi iri aive economist Friedrich von Wiser, uyo, muTheory yake yeSocial Economy (muna 1914) akaitsanangura sechinorambwa pakuita sarudzo. Kwaari, pane sarudzo imwe chete ine musoro, nepo dzimwe dzichifanira kuraswa, saka iyi temu.
Uye ndezvekuti, kunze kwezvikumbiro muhupfumi, mari ..., izwi iri rinogona kushandiswawo padanho remunhu.
Mukana mutengo marudzi
Nekuti chero sarudzo inoitwa pakati pesarudzo dzakasiyana dzinofanirwa kuitwa inosanganisira mutengo, mutengo wemukana unonzi ndewemhando mbiri dzakasiyana:
Kuwedzera mari yemukana
Zvinoreva izvo mari inozomuka kana zviwanikwa, kana sarudzo dziripo, zvisina homogeneousMune mamwe mazwi, hazvigone kuenzana kana kuitwa sechinangwa sezvinobvira pakati pevakaenzana.
Muchiitiko ichi, izvo zviwanikwa zvinova zvisingashande uye hazvibudiriri. Semuenzaniso, kugadzira chigadzirwa uchishandisa mamwe marudzi ezviwanikwa izvo zvisina hutano hwakafanana nehwepakutanga, nenzira yekuti kutengesa kunodonha uye zviwanikwa zvinotanga kusashandiswa nekuti hapana kudiwa kwavo.
Constant mukana mutengo
Ivo vanonzi mari yeRicardian uye vanopihwa apo zvigadzirwa zvekugadzira zvinotsiviwa nevamwe pasina kukanganisa chigadzirwa chacho, nokuti ndechemhando yakaenzana.
Isu tinokupa iwo muenzaniso wakafanana sepakutanga, iyo yauri kugadzira chigadzirwa uye sarudza kushandura zvimwe zviwanikwa kana zvikamu zvezvinhu izvo kune zvimwe zvine hunhu hwakafanana asi zvinokuunzira mamwe mabhenefiti. Muchiitiko ichi, sezvo isingakanganisi kunaka kana kugadzirwa, inonzi inenge iri mari inogamuchirwa.
Sei mutengo wemukana uchikosha zvakadaro?
Kana wafunga nezvazvo pese paunofanirwa kuita sarudzo, unorasikirwa nevamwe vaunosiya, asi, pamwe navo, zvakare kuwana kwaungadai wakawana, mune iyi nyaya yatorasikirwa. Mune mamwe mazwi, chero sarudzo yaunoita pamusoro pezvizhinji inounza mhedzisiro yakanaka uye yakaipa. Uye kunyangwe iri izwi rakachipa, chokwadi ndechekuti isu tinogona kuishandisa zuva nezuva.
Nemukana mari unogona kuva a pfungwa yekuti chii purofiti yakarasika nekusiya iyo pfungwa pane imwe. Uye chii chinogona kutiitira? Padanho rebhizinesi, kuita kuenzanisa, dzimwe nguva usati waita sarudzo, kuitira kuti uite sarudzo yakakodzera. Ndiko kuti, ivo havatakurwe neiye wavanoda zvakanyanya kana uyo anobatsira zvakanyanya pakutanga pakuona, asi panzvimbo pezvo mabhenefiti nemhedzisiro yezvose zviri zviviri zvinokosheswa kusarudza.
Zvino, muhuwandu hwezviitiko izvi, mari yacho haingave yakakosha nekuti kune zvimwe zvinhu zvakawanda zvinouya. Asi kazhinji yenguva sarudzo yekupedzisira inoitwa neiyo ine bhenefiti huru yekambani.
Chii chinonzi mukana mutengo mune zvemari
Kunyangwe zvingave zvatove pachena kwauri kuti ndeupi mutengo wemukana, zvinogoneka kuti, kana zvasvika kumari, inogona kuchinja zvishoma. Uye ndezvekuti mune iyi kesi inoreva purofiti yekudyara kana njodzi inogamuchirwa inofungidzirwa. Semuenzaniso, kana ukafunga kuisa mari yako mumapurojekiti maviri (A uye B), chero ipi zvayo inogona kukupa nhevedzano yemabhenefiti. Kana yangotorwa, Mutengo wekuita dzimwe sarudzo uye izvo zvakawanikwa neakasarudzwa zvinofanirwa kuongororwa x nguva yekuziva kana sarudzo yakanaka yaitwa.
Ngatizvionei nemuenzaniso unoshanda. Fungidzira kuti une sarudzo yekuisa mari muzvikamu zvekambani kana kutanga bhizinesi rembatya. Pakupedzisira, unoenda kune zvipfeko uye iwe unoungana uye unoshanda pazviri. Zvisinei, mushure megore, zvinoitika kuti hauna kuita purofiti; ndiko kuti, une pundutso ye0.
Mutengo wemukana waizoongorora kuti imarii emasheya ekambani panguva iyoyo nenzira yekuti, kana vakapa kukosha kwakanaka, uye kukuru kupfuura 0, zvinoreva kuti warasikirwa nemukana, sezvo usina kusarudza izvozvo. sarudzo . Kusiyana neizvi, dai vaive vasina kunaka, zvaizova pachena kuti chitoro chave chiri sarudzo yakanaka, kunyangwe isina kumbozivisa chero chinhu kwatiri.
Kana izvozvi uri kushamisika kuti mutengo wemukana wakaverengerwa sei, tinogona kukusiira equation ichauya ichishanda pamwero wemifananidzo kuti unyatsoinzwisisa.
Mukana mutengo = Kukosha kwesarudzo yausingatore - Kukosha kwesarudzo yaunotora.
Mune mamwe mazwi, ndiwo mutsauko pakati pezvaungadai wawana nesarudzo yawakarasa uye iyo yawakatora chaizvo.
Mune ino kesi values ​​inogona kuva:
Mukuru pane 0. Izvi zvinoreva kuti sarudzo yausina kuita yaive sarudzo iri nani pane yawakaita.
0. Kureva kuti, sarudzo imwe neimwe yakanga yakafanana (kana kuti yaigona kuwana zvakafanana, sezvo uchitamba nemutengo uri wemanyepo, wausingatore).
Less than 0. Kureva kuti, kana kubvisa ikoko kuchibuda mune negative, zvinoratidza kuti sarudzo yawakatora ndiyo yakafanira uye kuti yaita kuti ukunde.
Iko zvino zvave kujeka kwauri kuti mutengo wemukana chii? Une kupokana here? Zvakanaka, usafunga nezvazvo uye tibvunze isu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Ndeipi mari yemukana